Tratran’ny vela-pandrika : voasambotra ny zandary roa lahy mpanao trafikam-basy | NewsMada
Tratran’ny vela-pandrika : voasambotra ny zandary roa lahy mpanao trafikam-basy
Mazava izao fa ao anivon’ny mpitandro filaminana ao ihany no misy manao trafikana fitaovam-piadiana ampiasain’ny jiolahy. Anisan’izany ireto zandary roalahy mpanao trafikam-basy sy bala, tratran’ny vela-pandrika, ka voasambotra tany Toamasina, ny talata teo ireto.
Mpijoko voajoko! Zandary roa lahy, miasa eto Antananarivo sy any Arivonimamo no saron’ny zandarimariam-pirenena miasa any Toamasina, niaraka tamin’ny sivily roa hafa ny talata teo, tamin’ny 11 ora sy 35 minitra alina, nanao trafikana basy sy bala, taorian’ny vela-pandrika natao tamin’izy ireo.
Andro vitsivitsy talohan’io, nahazo vaovao ny teo anivon’ny kaompanian’ny zandary miasa ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina fa misy andian’olona mivarotra basy sy bala avy aty Antananarivo ho any Toamasina. Tsy niandry ela, niroso tamin’ny fanadihadiana ny zandary ka nataon’izy ireo ny vela-pandrika mba hisamborana azy ireo.
Nametraka sakana ny zandary avy ao amin’ny Brigade Port sy avy ao amin’ny Groupement zandary Atsinanana teo amin’ny PK 11 RN2 Sarimasina, kaominina Fanandrana Toamasina II. Nanao ny fisavana ireo fiara rehetra nandalo teo an-toerana. Olona efatra noho izany no tratra izay nahatrarana basy PA 9 mm, marika Oto By kimar.k, vita italiainna sy fahana iray hafa misy bala 7,62 mm miisa fito. “Marihina fa basy tsy fampiasa eo anivon’ny mpitandro filaminana ity sarona ity”, raha ny fanazavana.
Anisan’ireo olona efatra izay tratra ny zandary roa lahy izay nanao fanamiana sivily. Notanana natao andrimaso izy efatra ireo nanaovana famotorana ary nogiazana ny basy sy bala nentin’izy ireo. Voalaza fa ireto tokoa ireo nikasa hanao trafikana basy tany Toamasina. Mbola anatin’ny fanaovana ny fanadihadiana lalina ny zandary momba azy ireo.
“Tsy misy tombo sy hala fa rehefa vandana dia kary ary ampiharina tsy misy tsikombakomba ny lalàna. Manohy hatrany ny ezaka efa natombony ny zandarimariam-pirenena manerana ny nosy, manavaka ny vary amin’ny tsiparifary eo amin’ireo miaramila feheziny mba hahazoana mifehy bebe kokoa ny fandriampahalemana. Manentana ny tsirairay mba tsy hisalasala hanome vaovao raha mandre fandikan-dalàna na iza na iza manao izany amin’ny lafiny rehetra satria iaraha-manana ny filaminana”, hoy ny fanazavan’ny zandary.
Mazava ny resaka fa amin’ny mpitandro filaminana ihany no misy manao jiolahy na manampy ny jiolahy. Ny basin’izy ireo ihany koa ny ampiasaina amin’ny fanafihana. Ity ny tranga farany fa talohan’izao, ireo mpitandro filaminana mpiambina zanaka olona ambony tratra nanao asan-jiolahy. Ny raharaha toy izao matetika ny mahatonga ny olona tsy hatoky intsony ny mpitandro filaminana. Miteraka ny fitsaram-bahoaka, ny kolikoly, sns. Tsy ny rehetra kosa anefa, fa izao efa misy fandraisana andraikitra izao.